Mana hidhaatii baasanii ajjeesuun abdii kurannaa isa dhumaa ti!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMana hidhaatii baasanii ajjeesuun abdii kurannaa isa dhumaa ti!!
Yaa sabaa quba qabaadhaa!
Chiro (Ciro), Hararge, Oromia Oromo Protest
Ciro, Harargee, Oromiyaa.
Kun Eela keenya bara 2016 Sulultaatti raawwate; har’as gochaadhuma sanatu, Qeerroo keenya mudachaa jira.
Waardiyyaanis, manni hidhaas kanuma yeroo sanaa ti; kan jijjiirame bara qofaa dha.
Kanas qabsoo keenyaan keessaa ni baana!!
We still stand with #OromoProtests
“Waan kun mana hidhaa Qilinxoo keessatti ta’aa jira. Arma dura barataa yuunivarsitii Wallaggaa kan ta’e Gaaddisaa Nagaasaa jedhamu shororkeessaa jedhanii yakkuun ma’akalaawwiitti baatii 5 erga hidhanii booddee Qilinxootti dabarsanii waggaa tokkpofi baatii 6 booddee sababa qorannoo jedhuun gadi baasanii as buutee isaa dhabamsiisanii jiru.
Ammas namoota galmee isaatirra jiran lama injinar Aanaa Baayyisaafi Barataa yunivarsitii Mattuu kan ta’e Caalaa Baayyisaa bifuma walfakkaatuun ajaja irratti baasanii gadi baasun dhabamsiisuuf jiru. Waan kana dhaddachi 4ffaan ifatti baasee dubbachuun waan kun akka adeemaa jiru amanuun isaa ammoo raajidha.”
Boorataa, Booree Baasu
Abshiir, mirgi keeruma!!
Waan nama aarsu. Hedduu na aarse! Dajanee Xaafaa sababa Itti-aanaa Dura Taa’aa KFO ta’eef hidhame. Ilaalcha siyaasaa inni qabuu fi aangoo dhaabni isaa Oromiyaa keessatti karaa filannoo bilisaa argachuu malu sodaachuu malee mootummaan seeraan ala nama kana hidhuuf sababa tokkollee hin qabu. Adeemsi dhaddachaa innii fi namootni siysaa hedduun kanneen akka Jawarii fi Baqqalaa Garbaa itti dhiyeeffaman guutummaa guutuutti dharaan kan guutme dha. Mootummichi namoota nagaa hidhuu fi ajjeesuuf sodaa homaatuu akka hin qabne ragaalee hedduun ni mul’isu. Dubbiin himata Dejenee irratti baname kanaa garuu adda. Abiy dhiyootti filannoo geggeessa, paartileen waan haqaaf dhabatan fakkaatanii fi beekamtii mootummaan hundeeffamnii socho’anis achi keessatti qooda fudhatu. Geggeessitoonni Oromoo uummata biratti fudhatma qabaataa turanis keessa jiraachuu malu, isa yeruma sana ilaalla. Filannichi akka hin geggeeffamne danquu qabna. “Sirni haqaa” biyyattii Oromoo ykn gaggeessitoota siyaasaa ta’uu qofaaf jecha otoo nu hidhuu filannoon dharaa bilisaan geggeeffamuu hin qabu. (hiikaa/translation (into Afaan Oromoo) by Jaal Korfello Sakresso
This is enraging. I am so angry. Dejene Tafa is imprisoned because he is the deputy chairman of the Oromo Federalist Congress, An Oromo political party in Ethiopia. There is no other reason for his illegal detainment except that the Ethiopian state fears his political beliefs and the power his party would have amassed in Oromia if they had participated in a genuine election. The trail that he and other high-level political figures like Jawar and Bekele are being put through is totally fake. The state has no problem killing and arresting innocent people en mass, plenty of proof of that, but something about this charge hit differently. Abiy will convene an election soon, there will be disingenuous opposition parties formed by and functioning on the state’s mandate, in it may even be Oromo leaders that had standing with the people in the past, be that as it may, when it happens, we should obstruct it completely. It should not be able to be convened freely whilst the “justice system” puts our people on trial for no other reason than their being Oromo and Oromo political leaders. Soretti Kadir
Jiboolee abbaa kootii alagatu fooyate
Nuti ijoollee keenya sabboonummaa Oromoon guddifanna.
Diina keenya mataan lafa haa ilaalu;